GLORY Career Training Centre GLORY Career Training Centre တွင်အင်ဂျင်နီယာဒီပလိုမာသင်တန်းများ၊ အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတတ်ပညာသင်တန်းများ၊ ကွန်ပျူတာ နှင့် အင်္ဂလိပ်စာကျွမ်းကျင်မှုသင်တန်းများ ဖွင့်လှစ်သင်ကြားနေပါသည်။ အင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာသင်တန်းများတွင် နှစ်စဉ် ပျမ်းမျှ အောင်ချက် (၈၂) % မှ (၁၀၀)% အထိရှိပါသည်။ အဆင့်မြင့် အင်ဂျင်နီယာအတတ်ပညာ သင်တန်းများဖြစ်သော PLC, CNC, Microcontroller (PIC) အပါအ၀င် အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းအတတ်ပညာရပ်မျိုးစုံကို လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးလျက်ရှိပါသည်။ ဂလိုရီတွင် အင်ဂျင်နီယာ ဒီပလိုမာသင်တန်းတက်သူတိုင်းသည် Foundation Class အပါအ၀င် လက်တွေ့ကျွမ်းကျင်မှု အတတ်ပညာ သင်တန်း (၂) မျိုးနှင့် အင်္ဂလိပ်စာ သင်တန်းတို့ကိုအခမဲ့တက်ရောက်ခွင့်ရရှိပါသည်။
GLORY Career Training Centre GLORY Career Training Centre is one of the leading training centre in Myanmar, We are conducting course engineering, vocational training, computer and English language proficiency, Our engineering diploma courses are achieving dramatic success with success percentage annually plying between 82 and 100 percent. We offer variegated professional and vocational courses inclusive of those advanced engineering ones like PLC, CNC, Microcontroller (PIC). All those who register with GLORY to attend engineering diploma course are entitled to two practical skills courser free of charge including the Foundation Class.
ကာScholarship အစီအစဉ်၊ပညာ ဒါန
သင်ကြားမှု အစီအစဉ်၊Discount အစီအစဉ်များလည်းထားရှိပါသည်။
GLORY has arrangements to grant scholarship to the youth who are in need of monetary assistance in addition to free tuition programs and discount programs.
ဂလိုရီသည် သင်တန်းသားများအတွက် စာသင်ခန်းအတွင်းသင်ခန်းစာများအပြင်
GLORY is implementing extra curricular activities to keep the youth high-spirited and well motivated to learn.
(20,000)ကျော်ရှိခဲ့ပြီး အချို့ မှာ ကမ္ဘာ့အ
GLORY has already trained 20,000 students as of end of 2016 with some products achieving success in performance of duties at world-class business firms.
၂၀၀၉ ခုနှစ် မတ်လတွင် ကမ္ဘာ့အမှတ်အများဆုံး ရွှေတံဆိပ်ဆုရကျောင်းသားအား ဂလိုရီမှ မွေးထုတ်ပေးနိုင် ခဲ့ပါသည်။
ထို့အတွက်ကြောင့် City & Guilds (UK) သည် ဂလိုရီ၏ လေ့ကျင့်သင်ကြားပေးမှုစနစ် မြင့်မားမှုကို အသိအမှတ်ပြုကြောင်း လက်မှတ်ကိုဂလိုရီသို့ ချီးမြှင့်ခဲ့ပါသည်။
GLORY produced in March 2009aGold Medalist that scored the highest marks around the world and this had won GLORY the recognition of City & Guilds (UK).
Latest News Courses Outline
Â» Engineering Diploma Course
Â» Vocational Engieering Course
Â» Computer Skills Course Â» English Proficiency Course Â» Fees And Time Table Mere six-month attendance at GLORY can win you the internationally recognized Electrical Installation Diploma presented by UK, GLORY is the first and only one training school in Myanmar that can issue Diploma in Electrical Installation.
သင်တန်းကာလ (၆) လ တက်ရုံဖြင့် နိုင်ငံတ ကာအသိအမှတ်ပြု UK မှ ချီးမြှင့်သော Electrical Installation Diploma ကို ဂလို ရီတွင် ရယူနိုင်ပါပြီ။ ဂလိုရီသည် City & Guilds ၏ မြန်မာနိုင်ငံ၌ ပထဦးဆုံးနှင့်တစ်ခုတည်း
သော Diploma in Electrical Installation
သင်တန်းကျောင်း ဖြစ်ပါသည်။ CONTACT US
No.138/140, Second Floor, Corner of Pansodan and Maharbandola Road and KTDA Tsp., Yangon, Myanmar. Phone : 09- 5197817, 09-73121717
facebook Link- https://www.facebook.com/GloryCareerTrainingCentre/
ကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းစာဖြေသူများထဲမှ အမှတ်အများ ဆုံးအဖြစ် အောင်မြင်မှုရကာ CGI (UK) မှ ရွှေတံဆိပ်ဆု ချီးမြှင့်ခြင်းခံရသော ဂလိုရီ သင်တန်းသား (၄)ဦး
2008 June Series Dip in Engineering Skill (Electronic)
2008 Dec Series Dip in Engineering Skill (Electronic)
2012 Dec Series Advanced Dip in Engineering(Mechanical) နေမင်းထွန်း
Copy Right Â© 2009-2010
Career Training Centre . All Rights Reserved.
Hit Counts |